कुवेतमा समाजसेवाको नाउँमा ठगीधन्दा: संकलित सहयोग पिडित भागिरथले पाएनन « Postpati – News For All
कुवेतमा समाजसेवाको नाउँमा ठगीधन्दा: संकलित सहयोग पिडित भागिरथले पाएनन
जेठ ०८, कुवेत । समाजसेवाको नाउँमा कुवेतमा ठगी धन्दा गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ । गल्फका रोजगारदेशहरु मध्ये सबै भन्दा बढी ठगीधन्दामा कुवेतमा बस्ने नेपालीहरु अगाडी रहेका छन् । कुवेतमा चेलीबेटी बेचबिखन देखि समाजसेवाको नाममा ठगीधन्दा गर्नेहरु अन्य देशको भन्दा अगाडी रहेको कुवेतकै नेपालीहरु बताउछन ।
यसैक्रममा कुवेतमा रहेका लुम्बिनी सेवा समाजका अध्यक्ष रुपेन हमाल ठगी धन्दामा लागेको खुलासा भएको छ । सडक दुर्घटनामापरि गम्भीर घाइते भएका बर्दघाट नगरपालिका १२ नवलपरासीका भागिरथ चापागाईको सहयोगमा उठेको करिव नेपाली १५ लाख रकम नबुझाएर हिनामिना गरेपछि उनको ठगी धन्दा खुलेको हो ।
दुई बर्ष बितिसक्दा पनि पिडितका नाममा उठेको सहयोग रकम बर्दघाट नगरपालिका ४ नवलपरासीका समाजसेवी रुपेन हमालले नबुझाएपछि कुवेत स्थित अन्य समाजसेबी र पिडित परिवारले उनीमाथि ठगीको आरोप लगाएका छन् ।
अस्पतालको कोमामा अचेत अबस्थामा रहेका पिडित चापागाईलाई नेपाल फर्काउन भनि उठाएको रकम दुई बर्ष बितिसक्दा पनि नदिंए पछि श्रीमती रजिता शर्मा चापागाईंले सहयोगका लागि हारगुहार गरेकी छन् । पिडित परिवार र अन्य विभिन्न संघसंस्थामा आबद्द व्यक्तिहरुको दबाबमा गत बैशाख ३० गते नेपाली राजदुताबास कुवेतको रोबरमा हमालले जेठ २ गते रकम बुझाउने लिखित सहमति गर्दा समेत उनले रकम नबुझाएको श्रीमती रजिताले बताईन् ।
दुताबासको रोबरमा पिडितलाई पैसा बुझाउन भएको सहमति पत्र
सडक दुर्घटनामा परेका भागिरथ चापागाई २६ मैना देखि अस्पताको कोमामा अचेत अबस्थामा छन् । तिनै अचेत श्रीमानलाई घरफर्काउने आसमा उनकी श्रीमती कुवेतमै बर्षौदेखि कुरेर बसिरहेकी छन ।
यसरि सुरुगरेका थिए रुपेनले सहयोग अभियान
कामगर्ने ठाउबाट आफ्नो बासस्थान (रूम) जाने क्रममा कुवेतको महाबुल्ला भन्ने ठाँउमा भागिरथ चापागाईं दुर्घटनामा परेका थिए । दुर्घटना लगतै चापागाईलाई कुवेतको प्रहरीले हदिया स्थित आदन हस्पिटलमा भर्ना गरेको थियो । गम्भीर दुर्घटना भएको खबर पाएपछि पिडितका भाई दान प्रसाद शर्मा चापागाईंले कुवेत स्थित प्रबासी मंचका एकजना जिम्मेवार व्यक्तिलाई दाईको दुर्घटना बारे जानकारी गराउदै सहयोगको याचना गरेका थिए ।
केही दिनमै फेरि कुवेत स्थित एकजना आफन्त शिव पराजुलीले पिडितलाई सहयोग गरिदिन अपिल गरेका थिए । सोहि सुचना र कुवेतमै संचालित नेपाली मिडियाहरुको समाचारको आधारमा लुम्बिनी समाज कुवेतको तत्काल महासचिव (हालका अध्यक्ष) रुपेन बिक्रम हमालले मे (जेष्ठ) महिनाबाट ‘भागिरथ बचाउ अभियान’ चलाएका थिए ।
सुरुमा एक महिने अभियान भनेर चलाएका थिए । बिरामीलाई घरफ़र्काउन प्रयाप्त रकम संकलन भएको भन्दै अभियान रोकि, ओमन एर लायन्ससंग बिरामी फ़र्काउने सम्झैता गर्न गएपनि उक्त रकम नपुग्ने जानकारी आएपछि फेरी आर्थिक संकलन अभियान थालियो ।
अभियानमार्फत विभिन्न सहयोगी दाताले दिएको रकम ४ हजार दिनार उठ्यो । जुन भागिरथलाई नेपाल पथाउन प्रयाप्त थियो ।
रुपेनको ठग्ने बहाना
खासगरी भागिरथ चापागाईकै गृह जिल्लाका हुन् समाजसेबी रुपेन हमाल । पिडित चापागाई बर्दघाट १२ नवलपरासीका हुन् भने हमाल बर्दघाट ४ नवलपरासीकै हुन् तर परदेशमा भाग्यले ठगेका गाउँलेलाई नै ठग्ने अपराधिक नियत हमालमाथि कसरि जाग्यो होला ? यो अनौठो बिषय छ ।
तस्बिर :लुम्बिनी सेवा समाजका अध्यक्ष रुपेन हमाल
बिरामी भागिरथलाई नेपाल फर्काउने प्रयाप्त रकम उठे पनि बिरामीलाई ल्याउन अक्सिजनको मात्रा पुगेन भन्दै बिरामी हस्पिटलमै राख्न भनियो । त्यसभन्दा पहिला पनि बिच-बिचमा कहिले कागज मिलेन, कहिले के मिलेन भन्दै हमालले विभिन्न बहान देखाउदै अचेत भागिरथलाई घरफर्काउन ढिलासुस्ती गरे ।
रुपेन हमाल आफ्नो परिवारिक कामले नेपाल आएको बेला बिरामीको कान्छो भाई र रुपेन हमालको संयोगबस हस्पिटलमा झम्का भेट भयो, जुनबेला रुपेन हमाललाई कुवेतकै एक ब्यक्ति संग फोनमा आर्थिक चलखेल बिषयमा कुरा भैरहेको सुने । फोन कलमा ति व्यक्तिले रुपेनलाई भन्दै थिए, ‘एउटा संस्थाको मान्छे आर्थिक चलखेल भएर फसेछन, अब हजुरलाई पनि समात्लान है’ भन्ने फोनको बार्तालाप पछाडीबाट भाइले सुने ।
भाई दान प्रसाद शर्मा चापागाईं पछाडी उभिएको देखेपछि रुपेनले फोनमा एक्टिङ गरे, ‘ए भागिरथ दाजु त मेरो आफ्नै दाई हो, उहाँको भाई र म सङ्गै छौ, यो मेरो ब्याक्तिगत अभियान हो, अब छिट्टै दाईलाई नेपाल ल्याउछौ भने ।
त्यसपछि भाई दान प्रसादलाई संका लाग्यो । रुपेन हमालकै संयोजनमा फेसबुक ग्रुप निर्माणगरि दाजु भागिरथको उद्दार बिषयमा छलफल चलाए । यहीक्रममा रुपेन हमालले मेडिकल रिपोर्टको समस्या देखाउदै ५२ देखि ५५ लाखको खर्च हुने डिमाण्ड सुनाए । त्यसपछि छलफल ग्रुप अन्योलमा पर्यो ।
फेरीपनि भाई दान प्रसादले रुपेनको नियत माथि प्रश्न उठाउँदा कुवेतका केहि समाजसेबी बुद्दिजिहरु रुपेनको चिप्लो कुरामा बिश्वास गरे र उल्टै पिडितका भाई र श्रीमतीलाई गलत भन्दै दोषी ठहर्याए ।
बुझ्दै जाँदा समजसेवाको नाममा ठग्ने रुपेन हमालको यो धन्दै रहेछ । बिरामीको परिवारलाई दोषी देखाएर दाइलाई हस्पिटल मै सडाएर उठेको पैसा झ्याप पार्ने योजनामा रहेछन, पीडितका भाई दान प्रसादले भने ।
नेपाली दुताबास कुवेतको असहयोग
जब बिरामीको श्रीमतिलाई हस्पिटलले फोन गरेर भन्यो; हस्पिटलबाट बिरामी लैजान कुनै दुबिदा छैन । लैजान मिल्छ छिट्टै लैजानुस । पहलकर्ता रुपेन हमाल र नेपाली दुताबासले ६ महिना देखि फोन उठाउन छोडे, तपाईहरु बिरामी किन लैजानु हुन्न ? हस्पिटल बतायो ।
तस्बिर : कुवेतको हस्पिटलमा अचेत अबस्थामा रहेका भागिरथ चापागाई
त्यसपछि रुपेन लगायतको केहि गिरोह ठगि धन्दामा लागेको भन्ने बारे कुवेतमा रहेका अन्य समाजसेबीहरु पनि बिश्वस्त भए । यसमा कतै दुताबासको पनि हात रहेको हो कि ? भन्ने कुवेतमा रहेका धेरै नेपालीहरुले संका समेत उब्जियो ।
पिडितको उद्दार बिषयमा रुपेनलाई सोध्दा मलाइ थाहा भएन भन्दै टार्न थाले । दूतावासका अधिकारीले (मनोज सिंह)लाई उद्दारको लागि के भैरहेको छ भन्दा, ‘हामी कोसिस गर्छौ’ भन्दै टार्ने काम गरे ।
यता बिरामीको हस्पितलको अपडेट रिपोर्ट हेरौ भन्दा रुपेनले उही पुरानै स्क्यान गरिएको रिपोर्ट ल्याएर आँखा छल्ने काम गरेका रहेछन । रुपेनले कहिले भन्थे ‘अब हस्पिटलको सोसल ओर्करले नै बिरामीलाई नेपाल लैजाने भयो, साहुलाई साइन गरेर दिनु, पासपोर्ट साहुसंग छ।’
बिरामीलाई कहिले दूतावासले पठाउछ, कहिले हस्पिटलले पठाउछ भन्दै रुपेन हमाल पन्छिने कार्य तिर लागे । अन्त्त्यमा भाई दान प्रसाद र बिराटले बिरामीको सहि मेडिकल रिपोर्ट दिनु, नत्र तपाईलाई सिधै पत्रकार सम्मेलन गरि मुद्दा हाल्छौ, भन्दै ३६ घन्टाको अल्टिमेटम दिएपछि मेडिकल रिपोर्ट आयो । फेरि दूतावासको मनोज र रुपेन मिलेर ९००० केडी लाग्ने भन्दै झुक्याएर भाउजूलाई साइन गराइयो । तर बिरामी हस्पिटलमै अचेत अबस्थामा रहिरहे, उनका हात खुट्टा सुक्दै गएका छन् ।
त्यसपछि रुपेन हमालका बिरुद्द कानुनि उपचार खोज्न मिडियामा जान बाध्य भयौ, भाई दान प्रसादले पोष्टपाटीसंग बताए ।
रुपेनलाई कारबाहीको माग
पिडितका नाममा उठेको रकम अहिले सम्म नबुझाएपछि लुम्बिनी सेवा समाजले रुपेन हमाललाई केहि दिन अघि अध्यक्ष जिम्मेवारीबाट निष्कासन गरेको छ ।
यतिबेला कुवेत स्थित विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरु रुपेन हमालको बिरुद्द उत्रिएका छन् । रुपेन ठगीधन्दामा लागेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गरेका छन् । तर यता नेपाली दुताबासले भने अहिलेसम्म रुपेन हमाललाई कारबाहीको लागि कुनै पहल गरेको छैन ।
अन्य संघसंस्थाहरुको दबाबमा बैशाख ३० गते नेपाली दुताबास कुवेतले रुपेन हमालसंग जेठ २ गते रकम हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति भएपनि रुपेनले अहिलेसम्म उक्त रकम दिएका छैनन् । उता दुताबास पनि यो बिषयमा मौन बसेको छ । रुपेनलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन ।
दुखमा परेका नेपाली कामदारहरुको दुखमा साथ् दिने भनेर अड्डा जमाएर बसेको नेपाली दुताबास कुवेतले हस्पिटलमा अचेत अबस्थामा छटपटाई रहेका भागिरथ चापागाईको दर्दनाक अबस्था देख्न सकेन । बरु माफियाहरु संग दुताबासले साँठगांठ गरेको देख्दा कुवेतका हरेक नेपालीहरुको मनमा चिसो पसेको छ ।
अभिभाबक बनेर कुवेत पुगेको सरकारी निकाय भागिरथको बेथामा दुई बर्षसम्म किन निदायो ? यहाँ थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।
हेर्नुहोस पिडितकि श्रीमती रजिता शर्मा चापागाईले आँशु बगाउदै हारगुहार गरेको दर्दनाक दृश्य (भिडियो):
२०७६ जेष्ठ ९,बिहीबार को दिन प्रकाशित